Delivra waxay ku dareysaa shaqsiyeynta elektaroonigga ah iyo qeybinta | Martech Zone
Delivra waxay ku dareysaa shaqsiyeynta elektaroonigga ah iyo qeybta
Sabtida, Juun 9, 2016 Jimco, Juun 8, 2016 Douglas Karr
Waaxda Ganacsiga Mareykanka sidaana in iibka khadka tooska ah lagu xisaabtamo in ka badan saddex meelood meel wadarta kororka iibka tafaariiqda ee 2015. Cilmibaarista ayaa sidoo kale muujisay in iibka internetka lagu xisaabtamo 7.3 boqolkiiba wadarta iibka tafaariiqda ee 2015, illaa 6.4 boqolkiiba 2014.
Ololayaasha suuqgeynta emailka ayaa mas'uul ka ah in ka badan boqolkiiba toddoba dhammaan macaamil-ganacsiyeedka e-commerce, taasoo ka dhigaysa aaladda labaad ee ugu waxtarka badan suuq geynta ecommerce ee ka dambeysa hawsha raadinta ee internetka, taas oo ku faaneysa boqolkiiba 15.8 heerka beddelaadda. In kasta oo ay wax ku ool tahay, haddana dhammaan ganacsatada internetka looma abuurin si siman marka loo eego suuqgeynta miisaaniyadda iyo shaqaalaha.
Neil Berman, aasaasaha, iyo agaasimaha guud ee Delivra, waxay u muuqataa maanta dhaqaalaha e-commerce inuu albaabka u baneynayo furayaasha softiweer ee badan si ay ugu guuleystaan ​​inay u adeegaan baahiyaha tafaariiqleyda kaladuwan ee booska dhexdiisa.
Wax qarsoodi ah maahan in 100 tafaariiqda adduunka ugu sarreysa ay qaadan karaan barnaamijka ugu casrisan uguna adag ee suuqgeynta iimaylka maxaa yeelay waxay leeyihiin kooxo ballaadhan oo e-commerce ah si ay u bartaan xaddiga ballaaran ee waxqabad ee fulinta wax ku oolka ah. Waxa kale oo jira tafaariiqleyaal badan oo internetka iyo maxalliga ah oo khadka tooska ah ka shaqeeya oo aan lahayn koox suuq-geyn u heellan xaalado badan. Waxay muhiim u tahay tafaariiqleyda inay ka faa'iideystaan ​​emaylka guusha ee u keenaya e-commerce, laakiin waxay u baahan yihiin barxad bixisa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah sahlanaanta isticmaalka iyo codsiga degdegga ah.
Guudmarka Ganacsiga Delivra
Ganacsiga Delivra waa xirmada ugu dambeysa ee bixiyaha softiweerka suuq geynta emailka waxayna u heellan tahay otomaatiga suuq geynta e-commerce. Waxay udub dhexaad u tahay isdhexgalka Magento, Shopify, iyo WooCommerce, barxadku wuxuu ku habboon yahay tafaariiqleyaasha yaryar ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah - oo leh ama aan taageerin goobaha lebenka iyo madaafiicda — waxayna u oggolaaneysaa ololeyaal suuqgeyn suuq-geyn ah oo iibsashada ka dib. E-mayllada ka tagista gawaarida gaarka loo leeyahay ee shakhsiyadeed sidoo kale waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ilaa cilmi waxay muujineysaa in boqolkiiba 60 e-mayllada gawaarida laga tagay ay soo saaraan dakhli, iyadoo badankood ay dhacaan 24-ka saac ee ugu horreysa emaylka la diro.
Isku-darka gawaarida dukaamaysiga-waqtiga-dhabta ah ee software-ka wuxuu ka caawiyaa dukaamada internetka dhiirrigelinta wax soo saarka, hagaajinta khibradaha macaamiisha, iyo dib-u-eegista macaamiisha dhammaantood iyada oo loo marayo emayllada shakhsi ahaaneed, otomaatigga ah. Ganacsiga Delivra waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay si otomaatig ah u abuuraan qaybo ku saleysan xogta iibsashada isku dhafan Magento iyo WooCommerce qaybaha, ama Soo iibso noocyada wax soo saarka, si aad iskaga iibiso badeecada oo aad dib ula fal gasho iibsadayaashii hore. Intaa waxaa sii dheer, isticmaaleyaashu waxay la socon karaan ku-tiirsanaanta dakhliga ee emaylka si ay u istiraatiijiyad u diraan boosteejooyinka mustaqbalka oo ay si fudud ugu diraan farriimaha gawaadhida laga tagay si ay uga soo kabtaan dakhliga soo gala iyo kordhinta suuqgeynta iimaylka ROI.
Isdhexgalka gawaadhida adeegsiga gaarka ah ee adeegsadaha ayaa ka kooban qaybo otomaatig ah oo ku saleysan iibsashada qaybaha madal ama noocyada wax soo saarka.
Ganacsiga Delivra isticmaalayaashu sidoo kale waxay abuuri karaan qaybo iyaga u gaar ah si loogu isticmaalo joogtada ah, imtixaanka kala jaban, iyo dirista dirista. Tusaalooyinka qaybaha waxaa ka mid ah:
Ka faa'iideysiga xogta gawaarida laga tagay si loo abuuro a kicisay ogeysiinta dirista
Ka faa'iideysiga xogta amar si iibin waxyaabaha kale
Ka faa'iideysiga xogta dalabka si aad u weydiisato dib u eegis sheyga
Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah awooda lagu abuuri karo "dhacdo calaamadeysan" oo ku saleysan iibsiga boostada, taas oo u oggolaaneysa isticmaaleyaasha inay "dejiyaan oo ay iloobaan" ololeyaal otomaatig ah iyadoo la xakameynayo waqtiga iyo farriinta xiriirka la xiriira ganacsiga. Dhacdooyinka calaamadeysan ayaa u oggolaanaya suuq-yaqaan inuu qiimeeyo shuruudaha, isla markaana u kala gooyo tallaabo-socodka shaqada laba waddo. Tusaale ahaan, suuqleydu waxay dooran karaan inay qiimeeyaan in qofka qaataha ah uu diro boostada iyo inkale, uu gujiyay xiriir gaar ah, oo laga iibsaday dukaanka elektaroonigga ah, iwm. qofka qaataha ah, iyada oo ku saleysan ficilkii hore ama waxqabad la'aan ee qaataha. Suuqge ayaa dooran kara inuu diro emayllo kala duwan, cusbooneysiiyo meelaha xogta ama u diro farriimo SMS ah.
Ganacsiga Delivra sidoo kale waxaa ka mid ah qalabixinta leh Google Analytics Ecommerce. Ka faaideysiga xogta Google Analytics, isdhexgalkaani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay helaan marinnada muhiimka ah sida dakhliga, iibsashada iyo sicirka beddelaadda, iyo sida loogu nisbeeyo diritaan kasta iyo emayl guud ahaan. Marka lagu daro isdhexgalka Google Analytics, cabbiraadaha dirista waxaa sidoo kale lagu soo warrameeyaa qaabab muujinaya faahfaahinta koontada, muuqaalka guud, dirista tirakoobka, tirakoobka gudbinta iyo isbarbardhigga dirista.
Bilaabida shaqooyinka awooda leh ee Delivra Commerce waa nidaam deg deg ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub iyo kuwa hadda jira. Haddii kor loo qaadayo ama la bilaabayo koontada macaamiisha, Delivra waxay la jaanqaadi kartaa barmaamijka macaamiisha dukaamadeeda wax iibsiga qiyaastii hal saac.
Tags: emaylka gawaarida laga tagaydelivraganacsiga delivraemaylka e-commerceemailecommerce falanqaynta googlemagentoemaylka magentodukaankadukaameeysato emaylemayl kiciyaywoocommerceemaylka ganacsiga
Evolution Isbedelaya ee Telefishanka ayaa Socda